GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Bislama Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Totonac Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
▪ Ọ̀ na-esiri gị ike isonyere okpukpe ọ bụla n’ihi na ihu abụọ na adịghị n’otu nke ndị na-aga chọọchị na nke ndị ụkọchukwu na-asọ gị oyi? Ya bụrụ otú ahụ, o nwere ike ịbụ na i kweere nnọọ ilu ndị Frans a, “Ọ bụghị ibi ụlọ ụka nso bụ ịnọ Chineke nso.”
Ikekwe, ị na-akwanyere Baịbụl ùgwù ma chee na gọọmenti na ndị ọzọ kwesịrị ịhapụ mmadụ ka o kpewe okpukpe ọ bụla ọ chọrọ. Ma, i nwere ike ịnọ na-eche, sị, ‘Chineke ò kwuru n’ezie na ndị chọrọ ife ya otú ọ na-achọ aghaghị ịnọ n’otu okpukpe?’
Azịza ya dị nkenke bụ ee. Olee ihe mere anyị ga-eji jide nke ahụ n’aka? Mmadụ ò nwekwara nnọọ ike ịnọ n’okpukpe ọ bụla sọrọ ya?
Tụlee ihe nlereanya Jizọs. Ò nwere okpukpe ọ nọ na ya? Mgbe Jizọs dị obere, ọ na-eso ezinụlọ ya bụ́ ndị Juu na ndị ọzọ aga efe ofufe na Jeruselem. (Luk 2:41-43) Mgbe Jizọs toro, o so ndị Juu ibe ya fee Chineke n’ụlọ nzukọ ndị Juu dị n’obodo ya. (Luk 4:14-16) Mgbe Jizọs na-agwa nwaanyị nọ n’okpukpe ọzọ okwu, Jizọs kwuru, sị: “Anyị na-efe ihe anyị maara.” (Jọn 4:22) Ihe Jizọs kwuru ebe a gosiri nnọọ na ọ nọ n’okpukpe ndị Juu.
Jizọs mechara kwuo na ebe ọ bụ na mba ndị Juu jụrụ ya, Chineke ga-ajụ ofufe ha rụrụ arụ. (Matiu 23:33–24:2) Ma, o kwuru ihe gosiri na ndị chọrọ ife Chineke ofufe ọ na-anabata aghaghị ịnọ n’okpukpe. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.” (Jọn 13:35) Ọ ga-esiri onye na-eso ụzọ Kraịst nke ya na ndị kwere ekwe ibe ya na-anaghị akpakọrịta ike ịhụ ha n’anya. N’ezie, Jizọs kwuru hoo haa na okpukpe niile nọ n’ụzọ abụọ. Ọ kọwara na otu bụ okporo ụzọ “sara mbara ma dị obosara” nke na-eduba “ná mbibi.” Ma, o kwuru, sị: “Ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba ná ndụ dị warara, okporo ụzọ ya dịkwa mkpagide, ndị na-achọta ya dịkwa ole na ole.”—Matiu 7:13, 14.
N’ihi ya, o doro anya na ọ bụghị okpukpe ọ bụla ga-eduga mmadụ ná ndụ. Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara isonyere ndị “ga-eyi ndị okpukpe ma ha ajụwo ike ya.” Okwu Chineke kwukwara, sị, “zere ndị dị otú ahụ.” (2 Timoti 3:5, The NET Bible) N’aka nke ọzọ, anyị ga-erite uru dị ukwuu ma ọ bụrụ na anyị achọta ndị nọ n’ụzọ ahụ nke na-eduba ná ndụ ma sonyere ha. Ha ga na-agba anyị ume ma na-akwado anyị ugbu a, anyị ga-enwekwa ezigbo olileanya maka ọdịnihu.—Ndị Hibru 10:24, 25.
Olee otú ị ga-esi mata okpukpe nke nọ n’ụzọ ahụ dị warara? Ọ́ gaghị adị mma ka ị tụlee otú Baịbụl si zaa ya n’isi nke 15 nke akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? * Isiokwu ahụ ga-enyere gị aka ịmata okpukpe nke i kwesịrị isonyere.
^ par. 9 Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ M̀ kwesịrị isonyere okpukpe?